Software ye IntelliCAD CAD. Enye iCAD
I-Linux inexhobo entsha ye-CAD yesizwe
Ngokungafaniyo nendawo yeGeospatial apho izicelo zoMthombo oVulekileyo zigqithisela kwezobunini, sibone isoftware encinci yasimahla yeCAD ngaphandle kwenyathelo leLibreCAD elisenendlela ende yokuhamba. Nangona iBlender sisixhobo esomeleleyo, ukuziqhelanisa kwayo kukwenza uphiliso hayi i-CAD isetyenziselwe ubuNjineli, ...
AutoCAD-AutoDesk, ezintsha, IntelliCAD
Ndifuna ukuqala ngokuchaza ukuba ayifani nokuthi i-CAD yasimahla kune-CAD yasimahla kodwa omabini la magama ngawona akhangelo kuGoogle ahambelana negama elithi CAD. Kuxhomekeke kudidi lomsebenzisi, umsebenzisi osisiseko wokuzoba uya kucinga ngokufumaneka kwayo ngaphandle kokwenza intlawulo yelayisensi okanye isilingo sobuqhetseba kunye ...
AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Ukuprinta kokuqala
Zimbalwa kakhulu iinkqubo ezenza oku, ubuncinci ngokulula okwenziwa yi-CivilCAD.Yintoni esiyilindeleyo, ngokubanzi, yingxelo yeepasile, ngebhlokhi, netafile yabo yezalathiso kunye nemida, imida kunye nokusetyenziswa. Masibone ukuba ungayenza njani nge-CivilCAD, usebenzisa i-AutoCAD nangona ikwasebenza neBricscad engabizi kakhulu kwaye ...
FastCAD, i-AutoCAD Shadow
Ukuba awuzange uve nge-FastCAD ... kuya kufuneka. Ndiyazi, ungazi okokuqala ukuba le nkqubo ikhona, kodwa ndifuna ukuthatha umzuzwana kobu busuku be-ayisi khrimu kunye neicookie ze-Oreo ukubonisa isixhobo esinokuthile esinokufunda kuso nokuba sikumhlathi wokugqibela. Kutheni i-FastCAD ibalulekile ...
AutoDesk Dgn Dwg umbono yam yokuqala
Molweni zihlobo zam, amatheko, ii-cohetillos, ii-nacatamales kunye nokuwola koNyaka oMtsha kugqityiwe. Kuhle ukubuyela kweli cala lobomi, kunyaka olungileyo weendaba. I-AutoCAD iza emva kweminyaka emi-3 emva kokuguqula ujongano kwaye kwathiwa inokuba ngunyaka lowo ...
Ndiyithanda kakhulu iGeoinformatics, ngaphandle kokuba yimagazini enencasa enkulu kulwakhiwo, imixholo ilunge kakhulu kwimicimbi ye-geospatial. Namhlanje ingxelo ka-Epreli ibhengeziwe, apho ndithathe khona ezinye izicatshulwa eziqaqanjiswe ngombala obomvu ukukukhuthaza kufundo olumnandi. Kwiinguqulelo zangaphambili ndenze uphononongo, namhlanje ndi…
QCad, AutoCAD enye ye Linux kunye neMac
Njengoko sisazi, i-AutoCAD inokubaleka kwiLinux kwiWayini okanye kwiCitrix, kodwa ngeli xesha ndiza kubonisa isixhobo esinokuba sisisombululo esinexabiso eliphantsi kwiLinux, Windows kunye neMac.Yiyi-QCad, isisombululo esenziwe yiRibbonSoft evela Ngo-1999 kwaye kweli nqanaba kufikelele ekuvuthweni okwaneleyo njenge ...
ProgeCAD, enye indlela eya ku-AutoCAD
IprogeCAD sisisombululo esinexabiso eliphantsi esekwe kwitekhnoloji ye-IntelliCAD 6.5, enokwamkelwa ngokugqibeleleyo njengendawo yesoftware yenqanaba le-AutoCAD. Makhe sibone ukuba yintoni iprogeCAD enayo: Ifana ne-AutoCAD inyani yokufana ne-AutoCAD zombini kwimiyalelo kunye nokusebenza kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuqeqesha ...
Ukuvavanya iNetbook kwiCAD / GIS
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendikhe ndacinga ukuvavanya ukuba iNetbook enjalo isebenza njani kummandla we-geomatic, kule meko bendivavanya i-Acer One eyandithumela kwezinye iigcisa zasemaphandleni ukuba ndiyithenge xa ​​ndityelele esixekweni. Uvavanyo lundincedile ukuba ndithathe isigqibo sokuba ekufumaneni kwam okulandelayo ndityala imali kwenye i-HP ephezulu ...
Acer balangazelela Bentley Systems Blog Dgn GvSIG OS GIS asibonise
Geospatial - GIS, IntelliCAD, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Ukuqhathaniswa kweB BitCAD - AutoCAD (i-Round 1)
Kwangoko bendithethile ngeBitCAD, eyenye indlela engabizi kakhulu kwi-AutoCAD, enentengiso enoburharha kwaye ngoku ikhuphe inguqulelo yayo engu-6.5 ngokusebenza kwe-3D. Yonke imihla iinkampani ezininzi ziyanyanzelwa ukuba ziwushiye umkhuba wokuqhekeza kuba izivumelwano zamazwe aphesheya zenza ukuba oorhulumente abaninzi babandakanyeke ...
Ukuhamba phambili kokuncinci kweCAD - Iindleko
Emva kokubhubha kweSAICIC, iinkqubo ezininzi zaseMexico zathatha le marike, zenza enye yeendawo zobunjineli ezaqala ukuzenzekelayo. Ndiyakhumbula ukuba ngamanye amaxesha bendifundisa ikhosi yeendleko, kwaye bekufuneka kuvavanywe izicelo ezahlukeneyo (ezazifumaneka ngezo ntsuku), ezinje ngeNewWall, Opus, iChampion neNeodata. Le yokugqibela yam yabonakala kum ...
AutoCAD-AutoDesk, Zobunjineli, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ndicinga ukuba intengiso yeBitCAD, isuka kwi-IntelliCAD, intle kakhulu, ethi yona ibe yindlela enexabiso eliphantsi kwi-AutoCAD njengoko bendithetha ngexa elidlulileyo xa besenza uphononongo olubanzi ngakumbi lwale nkqubo. Inika isifundo esihle kwisebe lokuthengisa elininzi hehe. Kwaye kuba ndiyabathanda, bona ...
Dwg GIS asibonise
I-CAD / GIS phakathi kwezinto eziphambili ze-Software
Isiseko seSoftware yasimahla (i-FSF) senziwe ngonyaka we-1985 ngeenjongo zokukhuthaza ukusetyenziswa, ukuphuhliswa kunye nokukhuselwa kwesoftware phantsi kwamaphepha-mvume angabanini bezikim zorhwebo. Via Gigabriones Ndifundile ukuba i-FSF ibhengeze iiprojekthi ezilishumi elinanye eziphambili, kubandakanya ezimbini kwimicimbi ye-geospatial: Indawo kaGoogle ...
AutoDesk Bentley Systems Dwg ESRI Umhlaba ka-Google KML
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ukuguqula i-AutoCAD Iifayile ze-2009 kwi-Microstation V8
Ndifumana ingxaki kwitekhnoloji isebenzisa iMicrostation V8, ijonge ukufunda ifayile ye-AutoCAD ka-2008. Imbali encinci ifomathi ye-dwg yayiqale isetyenziswe yi-Interact CAD, ephuhliswe nguMike Riddle kwi-70's, wayengomnye wabasunguli be-AutoDesk eyaqala ngegama elifanayo lokwandiswa ...